किन बढ्दैछ चेक बाउन्सका घटना : उपचार के ? | Ratopati
अब चेक बाउन्सका मुद्दा फौजदारी कसुर नबन्ने
personप्रयास श्रेष्ठ exploreकाठमाडौं access_timeसाउन २२, २०७६ chat_bubble_outline0
तर, पछिल्लो एक घटनाले चेक बाउन्सको मुद्दालाई बैङ्किङ तथा वित्तीय कसुरअन्तर्गत देवानी मुद्दा चलाइएको छ । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले बैङ्ङ्ङि प्रणालीलाई नोक्सानी पुर्याउने र व्यक्तिबीचको विनिमयलाई फरक रूपमा हेनुपर्ने फैसला गरेको छ । उच्च अदालत दिपायलले गरेको बैङ्किङ कसुरसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले गलत कानुनको प्रयोगबाट सही निष्कर्ष निस्कन नसक्ने भन्दै बैङ्किङ कसुरको व्याख्या गरेको हो । यस मुद्दाका लागि छुट्टै बैङ्किङ कसुरअन्तर्गतको देवानी फाटले हेर्नुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ । गणेश रावल जाहेरवाला र निर्मला सोडारी प्रतिवादी रहेको सो मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो व्याख्या गरेको हो ।
देवानी मुद्दामा जाँदा के हुन्छ ?
हाल सरकारी फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत प्रहरीले हेर्दै आएको चेक बाउन्सको मुद्दा अब अदालति वा देवानी मुद्दामा जाने भएको छ । यसले थप कानुनी जटिलता र अप्ठ्यारा आउने देखिन्छ । महानगरीय प्रहरी विभाग कोटेश्वर एसएसपी वसन्तकुमार लामा देवानी मुद्दाले चेक बाउन्सको समस्या थप चुलिने बताउँछन् ।
‘अहिले प्रहरीले हेर्दै आएको चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दा अदालतमा जाँदा न्यायको समयावधि बढ्ने देखिन्छ । कानुनी जटिलता र प्रक्रियाका कारणले सामान्य मुद्दामा पनि वर्षौं लाग्न सक्छ ।’ लामाले भने, ‘अदालतमा जाँदा पीडितको लागतसमेत बढेर जान्छ । वकिल खर्च, प्रशासनिक खर्च र ट्रान्सर्पोटेसन खर्चसमेत व्यक्ति सोहेमले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । यसले न्याय थप महँगो पर्न सक्छ ।’
एसएसपी लामाका अनुसार अहिलेसम्म चेक बाउन्सको मुद्दा प्रहरीले हेर्दा छिट्टै समाधान हुने गरेको थियो । तर अब अदालतमा जाँदा त्यसो नहुन सक्छ । यसले चेक भुक्तानीको रकमभन्दा अदालतीय खर्च बढी आउन सक्छ ।
यता, राष्ट्र बैङ्कले भने चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दाका बारेमा केही बोलको छैन । बैङ्कका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणि शिवाकोटी चेकको मुद्दा अदालतीय मुद्दा बनाइन नहुने बताउँछन् ।
‘चेक बाउन्सको मुद्दा देवानी मुद्दा बने चेकप्रतिको विश्वास घट्ने छ । यसले आर्थिक कारोबार नगदमा नै गर्नुपर्ने हुन्छ । जुन सहज छैन ।’ शिवाकोटीले भने, ‘डिजिटल र बैङ्किङ गतिविधिबाट मात्र भुक्तानी गर्ने सरकारी योजनामा यो प्रावधानले समस्या निम्त्याउँछ ।’
चेक बाउन्सको मुद्दालाई बैङ्किङ कसुरअन्तर्गत सरकारी फौजदारी मुद्दा चलाइँदा पीडितको हक नै कुण्ठित हुने अदालतको ठहर छ । विनिमय अधिकारपत्र ऐनले यस्तो कारोबारमा चेक दिने व्यक्तिबाट ब्याज रकमसमेत असुल्न सक्ने व्यवस्था गरेको तर, बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाउँदा उक्त सुविधा नभएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।
एकै कसुरमा उपचार खोज्ने फरक–फरक मार्ग भएमा पीडितलाई सबैभन्दा बढी आधिकारिक हुने उपचार पद्धतिमा जानुपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । चेक अनादरमा बैङ्किङ कसुरभन्दा विनिमय अधिकारपत्र ऐन नै पीडितको हकमा प्रभावकारी भएको पनि अदालतको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।
बैङ्किङ कसुरमा मुद्दा चलाउँदा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चलाइन्छ । यस्ता मुद्दामा सुरु कारबाही उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासबाट सुरु हुन्छ । तर पछिल्लो पटकको सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार अब भने चेक अनादरमा जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्नेछ ।
अहिले चेक अनादरमा प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि कसुरदार पक्राउ पर्ने र फौजदारी लगतमा मुद्दा चलाइने व्यवस्था थियो । अब विनिमय अधिकारपत्र अनुसार मुद्दा चलाइको अवस्थामा चेक दिने व्यक्तिले नियतबस नै गलत कारोबार गरेको अवस्थामा समेत मुद्दा चरणमा पक्राउ पर्ने अवस्था रहँदैन ।
के हो चेक बाउन्स ?
बैङ्किङ तथा वित्तीय व्यवस्थाअनुसार विनिमय वा भुक्तानीका लागि सहज होस् भन्ने किसिमले जारी गरिएको भुक्तानी आदेशपत्र नै चेक हो । यस्तो आदेश पत्र खातावालाले जोकोहीको नाममा जारी गर्न सक्छ र बैङ्कले पनि प्रक्रिया मिलेको खण्डमा भुक्तानी दिन सक्छ । तर यस्तो आदेशपत्र (चेक) बैङ्कबाट अनादर वा अस्वीकृत पनि हुन सक्छ । यदि खातावालाले काटेको चेक वित्तीय नियम वा चेकको नियमअनुसार मेल नखाएमा वा चेकमा आदेश गरेअनुसारको रकम नपुगेमा चेक अस्वीकृत हुनसक्छ । यसैलाई चेक बाउन्स भन्ने गरिन्छ ।
चेक बाउन्स हुने केही कारणहरु छन् । जसमा चेक केरमेट वा ड्यामेज भएमा, चेक काट्ने खातावालाको नाम फरक परेमा, विनिमयको मिति फरक परेमा, चेकमा उल्लेखित रकमको अक्षर र शब्द मेल नखाएमा, खातामा चेकमा उल्लेखित रकम नपुगेमा र खातावालाको हस्ताक्षर नमिलेमा बैङ्कले चेक सटहीमा अस्वीकृत गर्न सक्छ । यी मध्ये खातामा पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै पनि चेक काट्ने र दिने घटना नै आजको चेक बाउन्सको प्रमुख समस्या हो ।
सम्बन्धित बैङ्कले पर्याप्त रकम नभएको जानकारीसहित अनादर गरेपछि कानुनी उपचार खोज्ने विधि विनिमय अधिकारपत्र ऐन २०३४ ले गरेको छ । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय निर्धारण ऐनले पनि पर्याप्त रकम नहुँदा नहुँदै चेक काट्न नहुने व्यवस्था गरे पनि कसुरको स्पष्ट परिभाषा भने गरेको छैन ।
यस्तो कसुरमा विविमयपत्र ऐनअनुसार भुक्तानी पाउने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत पाउने व्यवस्था छ भने सोही कसुरमा तीन महिनासम्म कैद समेत हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।